ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ် သတ်မှတ်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ် သတ်မှတ်ခြင်း
Posted by etone on Feb 1, 2011 in My Dear Diary |6comments
ပြောင်းလဲလာသော ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အညီ အမျိုး သမီးတို့ (အဖွားအရွယ်မှ မြီးကောင်ပေါက်အထိ) ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နေကြသည်မှာ အ၀တ်အစား ၊ ဆံပင် ၊ မိတ်ကပ် အပြင်အဆင်ပါ မက ကိုယ်နေဟန်အနေထား ၊ လူမှူဆက်ဆံရေးတွေအထိအောင်ပင် များစွာပြောင်းလဲလျှက်ရှိကြောင်းတွေ့ရသည် ။ ဟိုးအရင်ခေတ်က ဘလပ်အန်ဝှိုက် ရုပ်ရှင်များထဲမှ အပြင်ဆင်မျိုး ၊ ပဲဟင်းမှောက်သိလို ဖြူပြာနှမ်းနေအောင် ပြင်ဆင်ခဲ့သော ခေတ်မှ ယခုအချိန်တွင် ထသွားထလာ မျက်နှာပြောင်များ နှင့် နှုတ်ခမ်းနီ ဂလော့စ်လောက်သာ ဆိုးကြသောခေတ် ။ ဆံပင်ပုံစံတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ … အိန္ဒြာကျော်စင်က နိုင်ငံ အကျိုးပြုကားထဲမှာ ရောဘတ်မြင့်မိုရ်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ပြီး ဆံပင် ဖြောင့်လိုက်ကတည်းက ပေါ်လာတဲ့ ဆံပင်ပုံစံ ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲမှာ ယခုထိစိးမျောနေတုန်းပါ …။ နောက်တစ်ဖန် သူကပဲ ဆံပင် အကောက်ကို အလိပ်လေးတွေ လုပ်ပြန်တော့ လိုက်လုပ်ကြပြန်ရော… ။ တင်မိုးလွင်ကလည်း လှိုင်းတွန့်အကြီး ပုံစံလုပ်ပြတော့ လူငယ်၊ လူကြီးပိုင်း အမျိုးသမီးတွေ လိုက်လုပ်ပြန်ရော ..။ ဆံပင် အကောက် ခေတ်စားတာက ပုလဲဝင်းရဲ့ ရေစိုကောက်ပါ… (သူ့အားကျလို့ လိုက်လုပ်ပြီး ခဏခဏရေစွပ်နေရလို့ ကျမနှာစေးဖူးပါတယ် ။ )
စကားပြောအမူယာဆိုလျှင်လည်း ၀ါးလုံးကွဲရယ်တာကတစ်မျိုး ၊ မပွင့်တပွင့် တစ်ခစ်ခစ် အိုက်တင်ပေးတာက တစ်မျိုး ၊ ဘောက်စပ်စပ်ပြောတာကတစ်မျိုး ၊ အီလည်လည် မတင်မကျ မထိခလုပ်ထိခလုပ်ပြောတာကတစ်မျိုးနဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို အမှီလိုက်နေကြပြန်ပါတယ် ။
ယခုလည်း မီဒီယာပေါ်ထိရောက်အောင် မင်းသမီးတွေက လော်လီတဲ့ အ၀တ်စားတွေ ၀တ်ပြလာတာ တော်တော် ဆိုးရွားပါတယ် ။ မင်းသမီးတွေက အိမ်ဖော်တွေ ၊ ဘော်ဒီဂတ်တွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကားစီးပြီး မပေါ်တပေါ်တွေဝတ်ပြပေမဲ့ … သူတို့အတွက် ဘာအန္တရာယ်မှ မရှိပါဘူး ။ အားကျတတ်တဲ့ အမျိုးကောင်း မိန်းမတွေ၊ ဆယ်ကျော်သက် အပျိုပေါက်လေးတွေသာ လိုက်ဝတ်မိလျှင်တော့ …. စတိုင်ကျကျ ဖက်ရှင်ဖြစ်ဖို့ထက် အန္တရာယ်ကို ဖိတ်ခေါ်ရာရောက်ပါတယ်….။ မြို့ထဲမှာ မြင်နေတွေ့နေရတာ တော်တော်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းပါတယ် ။ အမေကိုယ်တိုင်ဘေးမှာပါပါလျှက် သမီးဖြစ်သူက ဘောင်းဘီ တစ်ထွာစာလောက်လေး ၊ အရှက်လုံယုံဝတ်ပြီး လမ်းသွားနေတာ …ပုရိသတွေ မျက်စိကျွတ်မတတ်ကြည့်တာတောင် အကယ်ဒမီဆုတတ်ယူမဲ့ မင်းသမီးခြေလှမ်းမျိုးနဲ့ ပဲများပြနေတာ တကယ်မျက်စိစူးပါတယ် ။ တစ်ချို့ကလည်း ဘေးမှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါတတ်ပါတယ် …။ ကျမအထင်တော့ သူ့ချစ်သူပေါ့ … ။ ကောင်လေးကတော့ ဘောင်းဘီရှည်နဲ့ လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ထားပေမဲ့ …ကောင်မလေးကတော့ ရာသီဥတုအပူဒဏ်မခံနိုင်ဘူးထင်ပါ့ … ။ ဘယ်နိုင်ငံကလာမှန်းမသိလောက်အောင်ပဲ ပြင်ဆင်ထားသည်မှာ မင်းသမီးရှုံးပါတယ် ။ ကောင်လေးကလည်း သူ့ချစ်သူ ဒီလိုဝတ်စားထားလို့ ဘေးဘီဝဲယာကလူတွေကြည့်တာကို မနှမျောပဲ ဂုဏ်ယူပြီး ပွဲထုတ်လမ်းလျှောက်လေသလားဆိုတာကတော့ … ကာယကံရှင်တွေပဲ သိပါလိမ့်မယ် ။ ကျမ သူငယ်ချင်း ကောင်လေးတစ်ယောက်ပြောပြတာ ပြန်သတိရမိပါတယ် ။ မိန်းမတွေအ၀တ်စားဝတ်တာလွန်လွန်းလို့ ကြေးစားမိန်းမနဲ့တောင် ခွဲရခက်နေပါပြီတဲ့ရှင် … ။ ကျမလည်း ကြားကြားချင်း ဒေါသထွက်သွားတယ်ပေါ့ … မိန်းမတွေကို ဒီလောက် ပဲ ရှုံ့ချတတ်တဲ့ကောင် မိန်းမတွေနဲ့ မပတ်သတ်ပဲ အာသဝေါကုန်ခမ်းတဲ့ ရဟန်းလုပ်ပါလားလို့ ရွဲ့ပြောလိုက်မိတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှ ကျမလက်ခံလာမိပါတယ် ။ ဘီယာဆိုင်တွေမှာ စင်တင်တေးဂီတအတွက်ဖျော်ဖြေရတဲ့ ကောင်မလေးတွေဆိုလျှင် … မော်ဒယ်တွေလား ၊ မင်းသမီးတွေအလားပဲ တော်တော်လန်းပါတယ် …မျက်နှာတွေကလည်း ဆေးရောင်စုံ ၊ အ၀တ်စားကလည်း ပျံလန်နေတာ …။ လူကြားထဲရောနှောသွားလျှင်ဖြင့် တော်တော်ခွဲရခက်ပါတယ် …။ မီဒီယာတွေမှာ ပါလာတတ်တဲ့ မင်း သမီးတွေ၊ မော်ဒယ်တွေ က အစ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြလုပ်ပြီး ၀တ်ပြနေခြင်းကလည်း ပရိတ်သတ်ကို လှုံဆော်ရာရောက်ပါတယ် ။ ပြင်သင့်နေပါပြီ။ ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ် ကြိုက်သလောက်ဝတ်ပါ ဘာမှမ၀တ်ပဲနေလျှင်လည်း နေပေါ့ … ။ အပြင်ထွက်ရင်တော့ လူမြင်ကောင်းအောင် ၊ လူအများလေးစားအောင် ၀တ်ဆင်သင့်တာပေါ့ .. ။ လူအများလေးစားအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘီးဆံပတ်နှင့်ချိတ်ထဘီ ၊ အင်္ကျီရင်ဖုံးမျိုးမဟုတ်ပဲ … လုံခြုံပြီး တည်ငြိမ်သပ်ရပ်တဲ့ အ၀တ်စားမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ် … ။ မပေါ်တပေါ်ဝတ်ပြီး လမ်းသလားနေလို့ကတော့ ဆိုက်ကားသမားတောင် ပါးစပ်သရမ်းမဲ့ အခြေနေမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
ယောကျာင်္းတွေကလည်း မိန်းမမျက်နှာ ၊ အ၀တ်စား၊အပြောဆိုကိုကြည့်ပြီး ချည်းကပ်လေ့ရှိပါတယ် ..။ လွယ်လွယ်နဲ့ ကြွေတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးမျိုးထဲ ကိုယ်မပါရင်တောင် အထင်မခံနိုင်ပါဘူး ။ ပိုင်းလုံးနာမည်တပ်ခံရရင်တော့ နာမည် ပျက်ပါလိမ့်မယ် ။ အလကားရလို့ ပေးတိုင်း ၊ ကျွေးတိုင်း မယူသင့်ပါဘူး ။စပွန်ဆာ ထားတယ်လို့ နာမည် ကြီးပါလိမ့်မယ် …။ တစ်ခုခုကိုပေးတာဟာ ၊ တစ်ခုခုကိုပြန်လိုချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ် … သွေးမတော်၊သားမစပ်ပဲ အလာကားပေးနေတာ မရိုးသားပါဘူး …။ မိမိတန်ဖိုးကို မိမိဘာသာပဲမြင့်တင်ရမှာဖြစ်ပြီး သိက္ခာရှိရှိနေထိုင်တတ်ဖို့လည်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ကျင့်ကြံသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အမျိုးကောင်းသမီးတို့ရေ …နွေဦးမှာ လှေလူးရင် အရူးနဲ့ ညားတတ်တတ်တာမို့ ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ်မြင့်ကြပါစို့နော် ။ ။
(ပုံတင်ဖို့ကြိုးစားတာ တစ်နာရီလောက်ရှိပြီ ။ မရတာနဲ့ ပုံမပါပဲ လွှတ်လိုက်တယ် :D )
အသာမနေနိင်ပဲ … ကတ်(မျက်နှာပြင်းကတ်)သမျှခြွေချနေရင်ဖြင့် … ကွီးလဲ .. ရေငုံနှုတ်ပိတ် … ၀စီပိတ်ပါရမီ … မပါလာသမို. … နည်းနည်းပါးပါး … ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် လှန်ထောင်းရပေအုံးမပေါ့ … ဟီးးး
အခုခေတ်မိန်းကလေးတွေ တော်တော်များများ ၀တ်စားတာ တစ်ကရ်ပျံတရ် …
ကြက်နဲ.အနှိုင်းခံရလဲ … နှိုင်းတဲ့သူကို အပြစ်မဆိုသာတော့ဘူး။
တစ်ခါတုန်းက မမလေးတစ်ယောက် စွာကျယ်စွာကျယ်နဲ. ရန်တွေ.နေသံကြားလို. ကြည့်လိုက်မိပါတရ်။
စကပ်တိုပေါင်ပေါ်ဝဲ၀ဲ … အကျီင်္စွပ်ကျယ်နဲ. … လိုင်းကားလာစီးတော့ … လက်ကမြင်းခံရပီပေါ့။
ခဏလေးပဲစီးရတဲ့လိုင်းကားပေါ်မှာ သရမ်းတဲ့ ဟိုသကောင့်သားကို အပြစ်ပြောရမှာတောင် ခပ်ရွံ.ရွံ. …
ကောင်မလေးအ၀တ်အစားဒီဇိုင်းက ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့စတိုင်လ်နဲ.ဆိုတော့လေ …
တကယ်တော့ … ရိုးရိုးကြီးလဲဝတ်နေစရာမလိုပါဘူး … ခေတ်နဲ.လဲညီအောင် … အမြင်လဲမရိုင်းရလေအောင် … ဒူးနေရာဒူး တော်နေရာတော် … ခန်.ခန်.ညားညား သန်.သန်.ပြန်.ပြန်. ၀တ်ရင်ပဲအဆင်ပြေပီ …
အခုဟာက အလွန်အကျွံတွေဖြစ်နေလို.ပဲ ပြောနေရတာ … ကိုယ့်မြန်မာမိန်းကလေးတွေ … ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံး မပုတ်ပါရစေနဲ.ဟ။
ခုတော့ တစ်လှေလုံးမဟုတ်တော့ဘူး ကုန်းပေါ်မှာ လိုက်ပုတ်နေကြပြီလေ။ လူတွေရဲ့အမြင်မှာ လူတစ်ယောက်ကို မကောင်းတာမြင်ပြီးရင် အကုန် လိုက်ပြီး ပါးစပ်စည်းကမ်းမရှိ လွှတ်သရမ်းချင်ကြတာ အမြင်တစ်မျိုးနဲ့ကြည့်တာတွေဟာ အတော်ကို ဆိုးဝါးလှပါတယ်။ နောက်တစ်ချက် လှချင်လို့လုပ်လည်း သူများမြှောက်ပေးတိုင်းလုပ်တတ်ကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့အကျင့်ကလည်း အတော်ဆိုးဝါးလာပါတယ်။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ စေတနာနဲ့ပြောရင်တောင် ငါ့လောက်မလှလို့ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းအကြည့်တွေနဲ့ ကွယ်ရာ ချောင်းရိုက်မယ့်ပုံစံတွေဆိုတော့လည်း အဝေးကပဲ နေနေရတော့တာပေါ့။
မလွယ်တော့ဘူး…နောင်….ခုထက်ပိုဆိုးလာမယ် လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်…..
အမြင်မကြည်တာမဟုတ်ပါဘူး ။ မျက်စိနောက်တာပါ ။